S: Vårnadsbidrag-ga waxaan ku dari doonnaa qashinka - Radio Sweden Somali - Raadiyaha Iswiidhen | Sveriges Radio
S: Vårnadsbidrag-ga waxaan ku dari doonnaa qashinka
La daabacay måndag 2 februari 2015 kl 12.11
Mucaaradka ayaan kala xaajoon doonnaa
Wasiirka caymiska bulshada Annika Strandhäll. Sawirle: Henrik Montgomery/TT.
Dawladda Sweden ayaa diyaarinaysa qorshe ay ku xabaalayso nidaamka dhaqaalaha ee dhallaanka guryaha lagu hayo, waxa afkan iswiidhishka lagu yiraahdo vårdnadsbidraget.
Bartamihii bishii diseembar ayey xubnaha baarlamanku aqlabiyad ugu codeeyeen inuu halkiisa ka sii socdo nidaamka dhaqaale ee lagu taageero waalidiinta dhallaankooda guryaha ku xannaaneeysa muddada ey yaryar yihiin. Hase yeeshee ay dawladdu diyaarinayso iminka xeer lagu joojineyo nidaamkaa, sida ay sheegtay wasiiradda ceymiska bulshada Annika Strandhäll:
- Waan ka war-qabnaa middaa, sidaasi oo ay tahay ayaannu dooneynaa inaan mar kale hor geeyno xil-dhibaannada si aan u tijaabinno joojintiisa. Waxaannu wada-hadallo la yeelan doonnaa xisbiyada sidii aannu isugu deyi laheyn sidii taageero ballaaran middaa uga heli lahayn baarlamanka, sida ay sheegtay Wasiiraddu.
Miisaaniyadda dawladdu u qoondeeysay 2015 ee xubnaha baarlamanku aqlabiyadda ku diideen ayay ku caddeeyd in nidaamkaasi meesha laga saaro. Halka ey xisbiyada mucaaradka ee garabka midig Alliansen iyo xisbiga Sverigedemokraterna ugu war-geliyeen in dawladdu dib uga noqoto middaa. Middaasina oo aakhirkii aqlabiyad ey xisbiyada garabka midig Alliansen ugu codeeyeen iyaga oo taageero ka heley xisbiga SD bishii diseembar ee sannadkii tagay.
Sidaasi oo ay tahay ayay dawladdu diyaarinaysaa inay dib baarlamanka u hor keento xeer lagu baabi'ineyo miisaaniyadda dhaqaale ee lagu taageero qoysaska ilmaha ku xannaaneeya guryaha. Halka nidaamkani muhiimad ballaaran ugu fadhiyo xisbiga Kristendemokraterna (KD), iyadoona ay Emma Henriksson, ahna guddoomiyaha xubnaha uu xisbiga KD ku leeyahay baarlamanka sheegtay ay aad u dhaleecaysay go'aanka ay dawladdu ugu talo jirto inay nidaamkan ku baabi'iso:
- Waa tallaabo daandaansi ah in dawladdu ku howlan tahay sidii ay baarlamanka mar kale u hor keeni lahayd fikir ammuurtaa la xiriira oo harey ey xubnaha baarlamanku go'aan uga gaareen inaan wax laga bedelin oo aan dib loogu soo celin. Tallaabadaasi maahan mid lagu xushmeeneyo xil-dhibaannada baarlamanka ee sida aqlabiyadda leh go'aanka uga gaarey, sida ay sheegtay.
Halka ay wasiiradda caymiska bulshad Annika Strandhäll ay qabto inay tahay tallaabo aan caadi ahayn in dawladdu dib middaa u soo noolayso. Hase yeeshee ay dhanka kale aamin-san tahay in habkani yahay mid aan u wanaag-sanayn howlaha sinnaanta ragga iyo haweenka sidaa daraadeedna loo baahan yahay in qashinka lagu daro:
- Nidaamkani waa mid aan haba yaraatee wax tar u lahayn qaar badan ee haweenka ka mid ah. Qaar badan ee haweenka qaataana waa kuwo ey tacliintoodu hooseeyso, isla-markaana ka soo jeeda dalka dibaddiisa.
Strandhäll ayaa rajeeynaysa in ugu yaraan xisbi ka mid ah garabka midig uu ka soo hor-jeesto nidaamkan lagu magacaabo vårdnadsbidraget iyo sidii meesha looga saari lahaa.
- Waxaanan aamin-sannahay inay iminka jirto daaqad furantay sidii loogala xaajoon lahaa xisbiga Shacabka - Folkpartiet, oo horeyba uga soo hor-jeeday nidaamka taageerada dhaqaale lagu siiyo waalidiinta dhallaankooda guryaha ku xannaaneeya - vårdnadsbidraget. Waa mid lagu farxo inay mar labaad dib u soo nooleeyaan fikirkaa. Kaasina oo ka mid ah qorshaha fikirrada siyaasadeed dhanka is-dhex-galka ee xisbiga FP.